“waan idinka ceshanaynaa kaddibna suuqa ayaan dhigaynaa” – Sampdoria oo Juve uga carootey iibka Partik Schick – Gool FM
“waan idinka ceshanaynaa kaddibna suuqa ayaan dhigaynaa” – Sampdoria oo Juve uga carootey iibka Partik Schick
(Genoa) 17 Luulyo 2017 – Sampdoria ayaa furka ku xoortay arrin ay ku tilmaantay “wax lagu qoslo” oo ku hareereysan qorshaha Patrik Schick ugu wareegi lahaa Juventus iyagoo ka digey “waan idinka ceshanaynaa kaddibna suuqa ayaan dhigaynaa”.
Schick ayaa caafimaadka u maray Juve ku dhowaad bil kahor, balse weli lama rasmiyaynin heshiiska laacibka, iyadoo ay soo bexeen warar la xiriira dhanka caafimaadkiisa iyadoo la leeyahay wadnaha ayuu qalliin yar uga baahan yahay.
“Schick? Waa wax lagu qoslo. Wuu caafimaad qabaa, runtii wuu caafimaad qabaa,” ayuu yiri milkiilaha Samp jaalle Massimo Ferrero oo la hadlayay Il Secolo XIX.
“Waxa ay arkeen waa burunkiito oo kale! haddii ay Juventus doonayso inay beeca ka baxdo waxaan ka iibinaynaa 4 koox oo kale oo doonaysa iibsigiisa.” ayuu daba dhigay, isagoo sheegay inuusan xitaa ku iibin doonin €30m balse €40-50m.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: LA Galaxy vs Man Utd 2-5 (Rashford oo ragga ka dhex muuqdey)
Inter Milan oo Lazio kula heshiisay €22m si ay u qaadato Keita